Sergio Busquets Oo Tibaax Ka Bixiyey Horyaalka Uu Ka Ciyaari Doono Marka Uu Dhamaado Heshiiskiisa Barcelona – Latest Sports News
Sergio Busquets Oo Tibaax Ka Bixiyey Horyaalka Uu Ka Ciyaari Doono Marka Uu Dhamaado Heshiiskiisa Barcelona
Xiddiga khadka dhexe ee Barcelona, Sergio Busquets ayaa ka hadlay horyaalka uu ka ciyaari doono marka uu dhamaado qandaraaska uu kula jiro Barcelona oo dhamaanaya sannadka 2023.
Kubbad-burburiyahan caqliga badan waxa uu ogyahay in ay hadda da’diisu gaadhay 30 jir oo ay gebogebo ku dhow dahay xirfaddiisa kubadda cagtu, laakiin ma doonayo inuu noqdo ciyaartoy kaydka u fadhiya Frenkie de Jong oo xagaaga soo gaadhaya Camp Nou.
Waraysi uu siiyey warbaahinta Sports Illustrated ayaa waxa uu ku sheegay inuu aad u xiisaynayo inuu ka ciyaaro waddanka Maraykanka oo ay uga horreeyeen ciyaaryahanno badan oo markii ay da’doodu weynaatay u guuray MLS.
“Mar kasta waxa aan idhaahdaa boos dul-saar ah kuma yeelanayo Barcelona. Marka aan arko in damacaygii ka damaanayo, ama aan ogaado inaanan ku habboonayn, dhinac ayaan uga istaagi doonaa aniga oo dareensan wixii aan kooxda soo siiyey.” Sidaas ayuu yidhi Busquets oo tibaaxay inuu ka tegi doono kooxda marka uu dareemo in boos aanu ku lahayn safka koowaad.
Busquets waxa uu sheegay in aanu hubin inuu uga tegi doono Barcelona si uu koox kale ugu ciyaaro, laakiin waxa uu caddeeyey in horyaalka waddanka Maraykanka ee MLS uu ka mid yahay dookh u bannaan, waxaanu yidhi: “Ma saadaalin kartid mustaqbalka, laakiin waxa aan taageere u ahay Maraykanka oo kubadda cagtu ay korriin ka samaynayso.”